अब नेकपामा गुटकाे भेलादेखि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नसम्म रोक - Himali Patrika
अब नेकपामा गुटकाे भेलादेखि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नसम्म रोक
हिमाली पत्रिका ३० भाद्र २०७७, 10:17 am
काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयले भविष्यमा गल्ती, कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार अब पार्टी विवादलाई कटुतापूर्ण र यदाकदा शत्रुतापूर्ण तहमा भड्काउन खोज्ने काम कसैले गर्न पाइने छैन ।
स्थायी कमिटीले पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुट गुटका अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासलाई कडाइकका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई अध्यक्षले जारी गरेको निर्देशामा पार्टीलाई अनुसाशित र मर्यादित तुल्याउने प्रण गरिएको छ । पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावि लेख्न पनि नपाइने निर्देशन पनि जारी गरिएको छ ।
पार्टी हितविपरित गतिविधि गर्ने प्रवृतिलाई कडाइका साथ रोक्न जिम्मेवार सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गरिएको छ ।
पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय जारी गर्दै विभिन्न सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाटै पनि गम्भीर गल्ती, कमीकमजोरी हुन पुगेकाले अब यस्ता कमीकमजोरी नहुने प्रण गरिएको छ ।
‘संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृति झाँगिर्दै जाँदा पद्धतिहीनता, गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहिनता फैलिदैं गयो । पार्टी भित्रका अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न नसक्दा आन्तरिक एकता कमजोर भएको छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
अध्यक्षद्वयले सबै नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई आ–आफ्ना गल्ती, कमीकमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा र आत्मालोचित हुँदै भविष्यमा त्यस प्रकारका गल्ती, कमजोरी दोहोरिन नदिन निर्देशित गरेका छन् ।
सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्न पनि भनिएको छ ।
आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्न र गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्न परिपत्रमा भनिएको छ ।
बैठक चल्दै गर्दा हामी यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं वा सक्तैंनौं ? पार्टीको एकता अक्षुण्ण रहन्छ वा रहँदैन ? भन्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको स्वीकारिएको छ ।
निर्देशनमा पार्टीमा विग्रह र विभाजनको अपेक्षा गरेका देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू उत्साहित हुने र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य तथा आम नेपाली जनता निराश हुनेसम्मको अवस्था देखा परेको परिस्थिति बनेको बताइएको छ ।